इरानमा प्रदर्शन : हिंसात्मक बन्यो तेस्रो दिन
Tue, Jul 17, 2018 | 21:43:27 NST
06:08 AM (7months ago )
पुस १६ – इरानमा गएको तीन दिनदेखि सुरु भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएको छ । सार्वजनिक भएका भिडियो फुटेजमा सरकार विरोधी प्रदर्शन अव्यवस्थित बन्दै गएको र हिंसात्मक घटना भएको देखिएको हो । इरानको उत्तर पूर्वी शहर मशहदबाट सुरु भएको प्रदर्शन देशका धेरै शहरमा फैलिएको छ । मूल्य वृद्धि तथा जीवनस्तर खस्किएको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शनले सरकार विरोधी प्रदर्शनको रुप लिएको हो । मूल्य वृद्धिको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शनमा इस्लाम धर्मगुरुहरुले शासन सत्ता विरुद्ध आवाज उठाएपछि त्यसले ठूलो रुप लिएको हो ।
राजधानी तेहरानसहितका देशका धेरै शहरमा प्रदर्शन भएको छ । इरानमा सन् २००९ पछि भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो प्रदर्शन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सन् २००९ मा विवादित चुनावपछि ठूलो प्रदर्शन भएको थियो ।
اعتراض‌های سراسری در ایران در سومین روز خود به خشونت کشید و باعث چند مورد زخمی‌شدن و تخزیب اموال عمومی شد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. pic.twitter.com/y5c9ckWuPG
सामाजिक सञ्जालमा जारी गरिएको भिडियोमा दुईजना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको दाबी गरिएको छ । दोरुद शहरमा भएको प्रदर्शनको क्रममा गोली लागेर उनीहरुको ज्यान गएको हो । प्रदर्शन चर्किँदै गएको र सरकारी सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा सतर्कता बढाएको बताइए पनि यकिन विवरण भने आएको छैन ।
सरकारी पक्षबाट आधिकारिक जानकारी नदिइएको र जानकारीका लागि सामाजिक सञ्जालको भर पर्नु परेकाले समस्या भएको बिबिसीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सरकारले मानिस भेला भएर प्रदर्शन नगर्न भन्दै चेतावनी जारी गरेको थियो । तर सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शनको पक्षमा उभिन आग्रह गरिएको छ ।
इरानमा यस्तो किसिमको सरकार विरोधी प्रदर्शन निकै कम हुने भएकाले सरकार चिन्तामा रहेको बिबिसीले जनाएको छ । देशको अर्थ व्यवस्थामा आएको समस्याका कारण राष्ट्रपति हसन रुहानी समस्यामा हुनुहुन्छ ।
दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धिको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले सरकार विरोधी प्रदर्शनको रुप लिएपछि उहाँ थप समस्यामा पर्नुभएको छ ।